Kubudirira hakusi kwekuenda, rwendo. - Zig Ziglar - Anodzokorora Pedia
Hupenyu hunova hunonakidza nekuti isu tese tine zviroto zvakasiyana uye zvishuwo zvekutevera. Izvo zvinotiita kuti tikurudzirwe uye zvinotigonesa kusangana nemamiriro ezvinhu akasiyana muhupenyu anotiita isu vanhu vedu.
Isu tinofanirwa kumisikidza zvinangwa kuti tikwanise kutevedzera nzira yakajeka yekuzadzisa zviroto zvedu. Asi mumwe anofanirwa kunzwisisa kuti hatifanirwe kumira kana kuzvidzikisira kana tangosvika pachinangwa chedu. Tinofanira kuvhurika kuti tiongorore zvimwe uye nekubvuma mikana yakawanda iripo pamberi pedu.
Tinofanira kuyeuka kuti kubudirira pauri hakuna kufanana nekusvika kwaunoda kuenda. Nepo tichifanira kugutsikana muhupenyu, nguva dzose zvakakosha kuti uchengetedze murazvo uchienda - kuda kuziva uye kuongorora zvimwe. Hatifanire kuzvimisa kuti tiwane zvakawanda muhupenyu.
Kana tikatora budiriro kuva rwendo, ipapo isu tichaenderera mberi nekufamba. Izvi zvichaita hupenyu hwedu hupfumi uye kutibatsira kuwana izvo zvinhu izvo zvingave zvisina kumira zvakanaka. Inoita kuti hupenyu huwedzere kuwedzera nekuti inotibatsira kuti tiwedzere kuona, vanhu vatsva, uye inoita kuti tikwanise kudzidza.
Zvinotipawo mukana wekupa mupiro kunharaunda munzira dzese dzatinogona. Kana tichigona kupa uye kuita musarudzo kune avo vanoda rubatsiro rwedu, tinogona kutaura kuti isu takabudirira zvechokwadi. Zvekare, uyu mupiro zvakare une magumo sarudzo dzekutarisa mukati
Mumwe anofanirwa kugara achitsvaga nzira yekuwana mikana mitsva uye ramba uchidzidza uye nekukura. Kuchengeta rwendo rwekudzidza kuenderera mberi kwakabudirira zvirokwazvo.
Kuparadza Quotes Nemifananidzo
Rwendo Kukurudzira Quotes
Motivational Quotes Pamusoro pekubudirira
Quotes Nezve Rwendo Uye Kuparadza
Quotes Pamusoro pekubudirira uye Kubudirira
Mifananidzo Yakabudirira Ine Quotes
Kubudirira Kwekufamba Quotes
Kubudirira Quotes kweBasa
Kufunga kwakanaka kunorega iwe uchiita zvese zvirinani pane zvisina kunaka kufunga kuchaita. - Zig Ziglar Yakabatana Zvinyorwa: